Hlola iFiji, iMelanesia - World Tourism Portal
Hlola iFiji, iMelanesia
Yini ukubona. Izindawo zokudlela ezihamba phambili ezihamba phambili eFiji, Melanesia
Iwebhusayithi esemthethweni yezokuvakasha yeFiji
Bukela ividiyo ekhuluma ngeFiji
Ebizwa nangokuthi iziQhingi zaseFiji, bayizwe laseMelanesia olwandle lwaseNingizimu Pacific. Cishe ingxenye eyodwa kwezintathu yendlela esuka E-New Zealand kuya Hawaii futhi siqukethe isiqhingi se-332 iziqhingi, ezimbalwa zazo ezakha iningi lendawo yomhlaba, futhi cishe i-110 yazo lapho kuhlalwa khona.
Hlola iFiji, umkhiqizo wezintaba-mlilo namanzi afudumele asendaweni eshisayo. Izinsika zawo zamakhorali ezahlukahlukene namuhla zidonsa izivakashi ezivela emhlabeni wonke, kepha zaziwusuku lobuningi bematilosi baseYurophu kuze kufike ekhulwini le-19th. Namuhla, iFiji yizwe elinamahlathi emvula asezindaweni ezishisayo, amahlathi ekhukhunathi, amabhishi amahle, namagquma acwebe umlilo. Kumvakashi ojwayelekile nje, ubusisekile ngokubi okufana nomalaleveva, izindawo zokubasa noma ubuphekula abaya ezindaweni eziningi ezithandekayo emhlabeni.
Olwandle olweTropiki; ukuhlukahluka okushisa okuncane kwesizini. Iziphepho zeTropic cyclonic (Uhlobo lweSouth Pacific of Hurricanes) zingaqala ngoNovemba kuye ku-Ephreli. Izivakashi ezinozwela lokushisa zingase zifise ukuvakasha ngesikhathi sasebusika seSemini yehlobo
Izintaba eziningi kakhulu zivela ngentaba-mlilo.
Viti Levu. Lesi siqhingi esikhulu futhi esibaluleke kakhulu sezwe. Inezakhamizi eziningi, ithuthukiswe kakhulu kwezomnotho futhi iyikhaya enhlokodolobha, iSuva.
UVanua Levu. Isiqhingi sesibili ngobukhulu, sizungezwe ezinye iziqhingi ezincane ezisenyakatho.
Isiqhingi sesithathu ngobukhulu, eduze neVanua Levu, lapho i-180th meridian isika lesi siqhingi ngesigamu. Kuyindawo ekhethekile yeTagimoucia Flower.
Lesi siqhingi siseningizimu yeViti Levu.
Iziqhingi zaseYasawa. Iqembu lesiqhingi laseNyakatho-ntshonalanga lidume ngamaholide angena esiqhingini.
I-Mamanuca Islands. Iqembu leziqhingi ezincane ezisentshonalanga yeViti Levu.
Iziqhingi zaseLomaiviti. Iqembu eliphakathi kweziqhingi phakathi kweViti Levu neLau Group.
Iziqhingi zaseLau. Iqembu leziqhingi eziningi ezincane empumalanga yeFiji.
Ukuthembela okukude kweFiji, ikhaya kokuhlukile IsiPolynesia isizwe.
ISuva - inhlokodolobha
UNadi (uphinyiselwe 'uNandi')
Ezokuvakasha ziwumgogodla womnotho waseFiji. Sekukonke, iFiji ingahlukaniswa njengendawo enentengo ephakathi nendawo futhi indawo yokuhlala iningi leFiji liwela kulolu banga. Kodwa-ke, izindawo zokugcina zikanokusho ezisezingeni lomhlaba, ezihlala eziqhingini ezicezile, ziheha abacebile nabadumile. IFiji nayo ingenziwa kwisabelomali, kepha kungakuhle ukuthi uhlele kusengaphambili. Izindawo zokudlela zesabelomali zinikeza ukubukwa okuhle ngokufanayo uma kuqhathaniswa nabazala babo abacebile, futhi ukutholakala kwe-intanethi yeFiji kuyathuthuka okuya kubahambela abahambayo.
Kukhona izindawo zokungcebeleka zomndeni ezinendawo yezingane kubandakanya amakilabhu wezingane ezingadambisa ingcindezi yabazali ababhekele izingane zabo ngenkathi zithola ithuba lokuziphumuza. Ezinye izindawo zokungcebeleka zibuye zibe ne-nanny service yabancane kunabo bonke.
Izilimi ezisemthethweni isiNgisi, isiFiji nesiHindi.
IsiNgisi lulimi lukahulumeni kanye nemfundo, futhi lukhulunywa kakhulu eNadi, Suva nakwezinye izindawo ezinkulu zabavakashi. Eziqhingini ezimbalwa zabavakashi, isiNgisi singakhulunywa ngobunzima.
Isimo seYasawa, esinye seziqhingi ezincane zaseFiji
Ingadi ye-Kulala Giant, Nadi, Fiji. NgoMsombuluko kuze kube uMgqibelo - 9 am to 5 pm .. I-Garden of the Sleeping Giant ekuqaleni kwakuyinsimu yomlingisi odumile, uRaymond Burr, futhi iseduze kwendlu yakhe. Ingadi ihlanganisa amahektha we-20 futhi igcwele ama-orchid asuka eFiji nezimbali eziningi. Njengoba unepulazi elihle lily nezitshalo eziningi ezingafani nalutho, le nsimu iyaqiniseka ukuthi uzowususa umoya wakho.
IFuji Museum yindawo enhle kakhulu yokuba izivakashi ziqonde isizinda esingokomlando seFiji. Ngezinto zakudala ezaqala emuva eminyakeni ye-3,700 inikeza imibukiso eminingi efundisa abahambi ngamasiko namasiko esizwe. Imnyuziyamu isenkabeni yezingadi zikaSuva zebhinical.
Yini okufanele uyenze eFiji, Melanesia
Ukugcotshwa kwamanzi amhlophe
UQueens Road, iPort Pacific Harbour, Pacific Coast, Fiji Islands. IPearl Fiji Championship Golf Course neLive Club itholakala ePacific Harbour futhi izungezwe amahlathi amahle asendaweni eshisayo. Ngama-60 + ama-bunkers, izicupho zamanzi eziningi, nenkambo yokudlula, inikeza inselelo ngisho nakubabazi begalofu abanolwazi kakhulu.
Ukuhamba ngezinyawo esibhakabhakeni phezu kweziqhingi zaseFiji.
I-Tropic Surf kuma-Sense ayisithupha, eVunabaka, eMalaolo Island Fiji (imizuzu engu-35 ngesikebhe esisheshayo esivela ePort Denarau). I-0600 1800. I-Tropic Surf Fiji yimizuzu nje ye-15 kusuka kumaza adume umhlaba wonke anjenge-Cloudbreak. I-Tropic Surf inikeza ama-surfs aqondisiwe, izifundo zama-surf kanye ne-surf academy ngakho-ke noma ngabe uyipro pro noma uqali ophelele waseTropic Surf uzokutholela umsebenzi we-surf ofanele ukukufanele Kutholwe uhambo nje lwesikebhe olufushane kusuka kuhlu lwamaphefu esandla sobunxele nangakwesobunxele kufaka phakathi iNamotu, uWilkes ne-Cloudbreak, abasubazi abanolwazi bazoba sesimweni sabo begibela amagagasi aseNingizimu Pacific. Kulabo abafuna ukuqala umdlalo omusha we-Tropic Surf omusha unikeza lonke ulwazi kanye namakhono adingekayo ukuguqula ube yiproj isikhathi. Amakhefu amancane njenge Swimming Pools ayindawo enhle yabafundi. Zizwa ubuhle bokubamba amagagasi kucezwana lwepharadesi langempela e-Six Sense Fiji.
Ama-Sense Spa ayisithupha, iVunabaka, iMalolo Island (Amaminithi we-35 nge-Speedboat evela ePort Denarau). Beka endaweni yendabuko ye-Fijian Village yendabuko, i-Sense Spa eyisithupha iqhakambisa ukwelashwa kwendawo kusetshenziswa izitshalo zokwelapha zendabuko futhi kudalwe ku-Spa's Alchemy Bar. Idolobhana lase Wellness lifaka indawo yokuphumula emanzi, indawo yokuzivocavoca, amagumbi okwelapha kanye ne-yoga pavilion. Ukuhlaziywa kwe-Wellness Ehlanganisiwe kuyatholakala kubavakashi abasiza ochwepheshe be-spa ukuncoma inkambo yokwenza wena ukuze ufinyelele amandla akho aphelele. Abelaphi abanekhono basebenzise imikhiqizo yemvelo enhlobonhlobo ukuhlinzeka ngemikhakha ehlukahlukene yezindlela zokusayina kanye nokuvuselela amakhono okusebenza kwesifunda.
Abantu bendawo badla ezindaweni zokudlela zekhefi kanye nezindawo zokudlela ezincane ezitholakala kuwo wonke amadolobhana. Ukudla kuyakha, kushibhile, futhi kuhluka kakhulu ngekhwalithi. Lokho oku-oda kusuka kumenyu kuvame ukuba ngcono kunokuphuma kwecala lokubonisa ingilazi, ngaphandle kwezindawo ezithengisa ukudla okuningi ngokushesha bese uzigcina zikusha. Izinhlanzi namaChips zivame ukubheja okuphephile, futhi zitholakala kabanzi. Amakhofi amaningi athela ukudla kwaseChinese kokunye Indian futhi ngezinye izikhathi inhlanzi enesitayela seFiji, iwundlu, noma izitsha zengulube. Eduze kwesikhumulo sezindiza, kutholakala izinhlobo eziningi zokudla, kufaka phakathi isiJapan nesiKorea.
Izilimo ezidliwayo zasendaweni zifaka izithelo ezintsha zasezindaweni ezishisayo (zingatholakala emakethe yomlimi kunoma yiliphi idolobha ngenkathi ethile isizini), i-paulsami (amaqabunga e-taro ebhakisiwe agqotshwe ujusi kalamula kanye nobisi lukakhukhunathi ngokuvamile nenyama noma inhlanzi ukugcwaliswa kanye no-anyanisi noma ugalikhi) , i-kokoda (inhlanzi noma okunye ukudla kwasolwandle okuphethwe obisini lukalamula kanye kakhukhunathi), nanoma yini ephekwe kuhhavini we-lovo noma we-pit. IVutu luhlobo lwendawo lwenhlwathi olukhula ikakhulukazi esiqhingini saseBeqa, kodwa futhi luyatholakala eSuva nakwamanye amadolobhana ngoJanuwari nangoFebhuwari. Ukudla okuningi kuphekwe obisini lukakhukhunathi.
Isitsha esenziwe ngendlela ejwayelekile eFiji sifaka isitashi, sidle futhi siphuze. Ama-Starches ajwayelekile ekudleni kwaseFiji afaka i-taro, ama-yam, amazambane amnandi, noma ama-manioc kepha angafaka isinkwa, ubhanana kanye namantongomane. Ukudliwa kufaka inyama, inhlanzi, ukudla kwasolwandle nemifino. Iziphuzo zihlanganisa ubisi lukakhukhunathi kodwa amanzi athela kakhulu.
Isiphuzo esithandwa kakhulu eFiji yi-yaqona ("yang-go-na"), eyaziwa nangokuthi "kava" futhi kwesinye isikhathi ibizwa ngokuthi "grog" ngabantu bendawo. I-Kava yisiphuzo esiphundu, esinambitha umhlaba esenziwe empandeni yesitshalo se-pepper (i-piper methysticum). Imiphumela yayo ifaka ulimi nezindebe ezinenombolo (imvamisa ihlala kuphela ngemizuzu eyi-5-10) nemisipha ekhululekileyo. I-Kava idakwa ngobumnene, ikakhulukazi uma idliwa ngamanani amakhulu noma njalo futhi umuntu kufanele agweme itekisi nabanye abashayeli abasanda kuthatha izintambo.
Ukuphuza i-Kava e-Fiji kudume ngesikhathi sokuwa kwe-cannibalism, futhi kwaqala njengendlela yokuxazulula izingxabano nokwenza lula izingxoxo zokuthula phakathi kwamadolobhana. Akufanele kudliwe eceleni kotshwala.
Ubugebengu obuningi benzeka eSuva naseNadi kude nezindawo zokuchitheka. Iseluleko esihle kunazo zonke ukunamathela ezinhlanganweni zamahhotela ngemuva kobumnyama, nokusebenzisa ukuqapha ngokweqile eSuva, Nadi nakwezinye izindawo zasemadolobheni ngemuva kokuhlwa. Abahambi babe yizisulu zobugebengu obunobudlova, ikakhulukazi eSuva. Ezinye izindawo zokungcebeleka namahhotela zinezindlela ezibanzi zokuphepha kunezinye okufanele zinakwe.
I-Fiji, njengingi seSouth Pacific, ingaba nemisebe yelanga ebanga kakhulu engadala ukushiswa okukhulu kwesikhumba esikhathini esifushane. Qiniseka ukuthi usebenzisa izigqoko, izibuko nezibalo zenkululeko eziphakeme kakhulu ze-SPF ukuvikela esikhumbeni SONKE esivele obala (kufaka phakathi izindlebe, izindlebe nezinsimbi zezinyawo) lapho uphumile elangeni.
IFiji, njengasemazweni amaningi asePacific Island, inomphakathi oqinile wamaKristu wokuziphatha; kokuba ikoloni futhi waguqukela ebuKristwini yizithunywa zevangeli phakathi ne-19th century. Ungamangali uma izitolo namanye amabhizinisi kuvaliwe ngeSonto. ISabatha liqala e6PM ngosuku olwedlule, kanti amanye amabhizinisi agubha iSabatha ngoMgqibelo esikhundleni seSonto. AmaNdiya amaningi angamaHindu noma amaSulumane.
Futhi, gqoka ngesizotha nangokufanele. Ngenkathi iFiji iyizwe elishisayo, ukugqokwa kwamabhishi kufanele kube kuphela olwandle. Thatha imikhondo yakho kubantu bendawo ngokuthi yikuphi abakubona njengokufanelekile lapho begqoka. Lapho uhambela amadolobhana kanye nemizana, kufanele uqiniseke ukuthi umboza amahlombe akho futhi ugqoke izikhindi noma amasalfa (amafishi) afihla amadolo akho (bobabili abesilisa nabesilisa). Lokhu kuyiqiniso ikakhulukazi ngokuhambela isonto, yize abantu bendawo bevame ukukubolekisa i-sulu ngokuhambela esontweni. Kufanele ukhumule isigqoko sakho lapho uhambela amadolobhana noma amakhaya.
Izingcingo zomphakathi ziningi futhi kuvame ukuzithola kalula (bheka ezitolo).
Hlola iFiji, Melanesia ngeke uzisole.